सुदर्शन अधिकारी झन्डै दुई दशकपछि सम्पन्न भएका ६ वटा प्रदेशका निर्वाचनले स्थानीय तहमा सयौंका संख्यामा रहेका राजनीतिकर्मीले नेतृत्व गर्ने स्वर्ण अवसर पाएका छन्। लामो समयसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा जनताका
नटुंगिएको हाम्रो दौड
पेशल आचार्य सबै दौडेका छन्। सधैँ दौडेका छन्। घरबाट, गाउँबाट, शहरबाट, देशबाट र विश्वबाटै क्रमिक दौड शुरु भएको छ। दौडिनेहरूका लाइन यस बखत मेरो देशमा क्याराभानजस्तै लाग्दछ। कमिलाका
श्रीमन नारायण कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्था र राजनीतिका निम्ति कर सुधार कुनै नयाँ शब्द होइन। विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुले सधैँ नै कर चोरीलाई रोक्न तथा जनतालाई राजीखुशी आफ्नो आयको एक
डा. देवीप्रसाद आचार्य नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। गाउँको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन। गाउँमा गरिबी, अशिक्षा र अभाव छ। गुणस्तरीय शिक्षा छैन। स्वास्थ्यको सुविधा छैन।
कपिल काफ्ले भाविद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा कुरा उठाइएको छ। केही हदसम्म यौनिकताको पक्ष पनि समेटिएको छ। ‘यौनिकता तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ लाई एकै ठाउँमा राखेर विषयविज्ञहरु यसको व्याख्या
दीर्घराज प्रसाईं कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका लागि राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सुयोग्य जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसका लागि निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो। नेपालमा २०६३ सालपछिको राजनीति गञ्जागोलको कारणले गाउँ,
डा. डीआर उपाध्याय अहिले दोसो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ। यो हामी सबै नेपालीको लागि खुशीको कुरा हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु अनिवार्य सर्त हो। हाम्रो
रुपनारायण खतिवडा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित वा ‘क्लिन फिड’ बनाइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञापन व्यवसायीहरुलगायत यसक्षेत्रका सरोकारवाला तथा त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलका दर्शकका
नन्दलाल खरेल मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन बढ्दो रुपमा छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बहुआयामिक र बहुमुखी चनौती हुने गर्दछ। विश्वका प्रायः
बद्री तिवारी स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणअन्तरगत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबै स्थान २ सय ८२ स्थानीय तहको परिणाम
दामोदर पौडेल स्थानीय चुनाव हुँदा पहिलो चरणमा मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागहरुप्रति जनताको समर्थन कति छ र कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन। दोस्रो चरणको चुनावले त्यो स्पष्ट गरेको
पविता मुडभरी पुडासैनी मुलुक निर्माणको जग स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएकाले अब देश समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा आमजनता विश्वस्त छन्। हरेक कामका लागि केन्द्र धाउने परिपाटी अन्त्य भई अब जनताले सर्वसुलभरुपमा आफ्नै
–बहादुर सिंह लामा वर्तमान संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । प्रदेश
बुद्धजन्मस्थलः भ्रम र वास्तविकता
अशोकनन्द वज्राचार्य नेपाललाई विश्वसामु मात्र दुई चीजले चिनाइन्छ। एक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भनेर त दुई शान्तिको अग्रदूत भगवान् बुद्धको जन्मभूमि भनेर। बौद्धमार्गीहरूको लागि अति श्रद्धाले हेरिने चार तीर्थस्थलहरूः